Fanombohana ny siansa fandikan-teny - AfricaArXiv
navoakan'ny Ekipa mpandika teny ekipa on 6th May 2021 6th May 2021
Faly izahay fa anisan'ny Mandika Siansa ekipa, miaraka amin'ireo mpikambana ao amin'ny hetsika Open Science sy Who's fahalalana. Amin'ny alàlan'ity fiaraha-miasa ity dia handray anjara amin'ny fampiroboroboana ny fahasamihafana amin'ny fiteny afrikanina amin'ny fifandraisana manam-pahaizana ny AfricaArXiv.
Ity fanambarana ity dia navoaka voalohany tamin'ny blog.translatescience.org/launch-of-translate-science/
Samy hafa ny fiaviany sy ny antony manosika ireo mpikambana ao amin'ilay vondrona. Hydrogeologist Dasapta Irawan dia maniry ny mpahay siansa afaka manoratra amin'ny fitenin'ny olona tompoiny. Ben Trettel miasa amin'ny famotehana ny sambo rano misavorovoro sy ny nenina ka tsy dia jerena ny fahitana be loatra avy amin'ny literatiora mikorontana Rosiana. Victor Venema miasa amin'ny fironana toetr'andro voamarina ary mila fampahalalana momba ny fomba fandrefesana (ara-tantara), izay tazonina amin'ny fiteny eo an-toerana; ny sahaniny dia mila mahatakatra ny fiantraikan'ny toetrandro na aiza na aiza ary angon-drakitra kalitao avy amin'ny firenena rehetra manerantany. Luke Okelo, Johanssen Obanda ary Jo Havemann dia miasa miaraka AfricaArxiv - vavahady Open Access notarihin'ny vondrom-piarahamonina mba hampiroboroboana ny voka-pikarohan'i Afrika. Tian'izy ireo ny hahita literatiora siantifika amin'ny fiteny afrikana mihoatra ny sakana famoahana siansa nentim-paharazana izay notoherin'ny fiteny vazimba ary tsy ho ela dia hanao ezaka fiaraha-miasa amin'ny fandikana ireo sora-tanana siantifika Afrikana amin'ny fiteny afrikana maro samihafa.
Ho an'ny vondrona ny teny "Literatiora siantifika" manana endrika maro karazana ary mety misy dikany amin'ny lahatsoratra, tatitra ary boky, hatramin'ny abstract, titre, teny lakile sy teny. Ilaina koa ny famintinana amin'ny fiteny hafa.
Izahay dia liana amin'ny hetsika isan-karazany hanampiana ny fandikan-teny: manome vaovao, tambajotram-pifandraisana, famolavolana sy fitaovana fananganana ary lobbying amin'ny fahitana ny dikanteny ho valin'ny fikarohana sarobidy.
Manana an'ity bilaogy ity izahay, ny Wiki, ny lisitra fizarana ary ny kaonty fitorahana bilaogy bitika ho an'ny fifanakalozan-kevitra momba izay azontsika atao hampiroboroboana ny fandikan-teny sy hanomezana vaovao momba ny fomba hanaovana fandikan-teny sy hahitana ireo efa misy.
Fitaovana isan-karazany (sy vondrom-piarahamonina mampiasa azy ireo) afaka manampy amin'ny fikarohana sy famokarana dikanteny. Ny tahiry iray misy lahatsoratra nadika dia mety hahitana azy ireo bebe kokoa. Ity data ity dia tokony hofenoin'ny olona sy ny andrim-panjakana nanao fandikan-teny, ary koa amin'ny tahiry mialoha sy lahatsoratra avy amin'ny diary fandikan-teny (tamin'ny vanim-potoanan'ny Ady mangatsiaka). Amin'ny alàlan'ny masoivohon'ny referansa (API), ny fitehirizam-bokin'ny gazety ary ny famandrihana mialoha ary ny rafitry ny fandinihan'ny namana dia mety hanondro fa misy dikanteny. Ny tahiry tahiry toy izany dia mety hanampy amin'ny fananganana datasety izay azo ampiasaina hampiofanana ny fomba fianarana milina amin'ny fandikana fiteny kely nomerika.
Misy tsara fitaovana fa ny fandikan-teny fiaraha-miasa amin'ny interface interface. Fitaovana mitovy amin'izany amin'ny lahatsoratra siantifika dia mety hanampy kokoa: ny fandikana lahatsoratra tsara dia mitaky fahalalana amin'ny fiteny roa sy ny lohahevitra; ity fitambarana ity dia mora kokoa ny mahazo miaraka amina vondrona iray ary miara-mandika no mahafinaritra kokoa. Ny fandikan-teny mandeha ho azy dia mety hanome drafitra voalohany ary hamonjy asa betsaka.
Raha azontsika atao ny mamantatra hoe iza amin'ireo lahatsoratra no manan-danja indrindra tokony adika izay mety hampiakatra ny fandrisihana ireo fototra ara-tsiansa (nasionaly) hamatsy ara-bola ny fandikana azy ireo. Amin'ny fampiasana ny Wikidata knowledgebase amin'ny fiteny maro afaka nataontsika manatsara ny fikarohana literatiora amin'ny fitaovana maro fiteny, dia toy izany koa lahatsoratra mifandraika amin'ny fiteny hafa no hita. Ho fanampin'izany dia azontsika atao ny mampiseho ireo mpitrandraka lahatsoratra amin'ny fiteny maro sy ny olona tsy tompon-tany fanazavana amin'ny fitenin-drazan'izy ireo amin'ny teny sarotra.
Raha tokony hankasitrahana azy ireo dia mandika sazy aza indraindray ny dikanteny. Google dia nanasazy tsy nahy ny olona nandika teny lakile satria hitan'ny rindrambaiko fa toy ny spamming amin'ny teny lakile izy io, raha ny lahatsoratra nadika kosa dia matetika no jerena ho plagiarism. Mila miresaka olana toy izany isika ary manova fitaovana sy fitsipika toy izany mba hahazo valisoa ireo mpahay siansa mandika ny lahatsoratr'izy ireo.
Ny teny anglisy ho fiteny iraisana dia nanamora ny fifanakalozan-kevitra manerantany ao anatin'ny siansa. Na izany aza, io dia nanjary sarotra kokoa ny fifandraisana amin'ireo vondrom-piarahamonina tsy anglisy. Ho an'ireo miteny anglisy dia mora ny manome lanja be hoe firy ny olona miteny anglisy satria matetika isika miresaka amin'ireo vahiny mahay miteny anglisy. Heverina fa olona iray tapitrisa eo ho eo no miteny anglisy. Midika izany fa tsy misy olona fito tapitrisa. Ohatra, amin'ny serivisy toetr'andro maro any amin'ny Global South dia olona vitsy ihany no mahay ny teny anglisy, saingy mampiasa ny tatitra momba ny torolàlana voadika an'ny World Meteorological Organisation (WMO) matetika izy ireo. Ho an'ny WMO, amin'ny maha-mpikambana ao amin'ny sampan-draharaha momba ny toetr'andro, izay iombonan'ny serivisy ny toetrandro rehetra dia misy laharam-pahamehana.
Ireo mpandahateny tsy anglisy na amin'ny fiteny maro, amin'ny kaontinanta afrikanina (sy tsy afrikanina), dia afaka mandray anjara amin'ny siansa mitovy lenta amin'ny fananana rafitra azo antoka izay ekena ny asa siantifika voasoratra amin'ny fiteny tsy anglisy ary adika amin'ny teny anglisy (na hafa fiteny) ary ny mifamadika amin'izany. Ny sakana amin'ny fiteny dia tsy tokony handany talenta siantifika.
Ny lahatsoratra siantifika nadika dia manokatra siansa ho an'ny olona mahazatra, ireo tia siansa, mpikatroka, mpanolotsaina, mpanofana, mpanolo-tsaina, mpanao maritrano, dokotera, mpanao gazety, mpikarakara, mpitantana, teknisiana ary siantifika. Ny sakana ambany kokoa amin'ny fandraisana anjara amin'ny siansa dia manandanja indrindra amin'ny lohahevitra toy ny fiovan'ny toetr'andro, tontolo iainana, fambolena ary fahasalamana. Ny fandefasana fahalalana mora kokoa dia mandeha amin'ny làlana roa: ny olona mahazo tombony amin'ny fahalalana siantifika sy ny olona manana mpahay siansa fahalalana tokony ho fantany. Manampy ny siansa sy ny fiaraha-monina ny dikanteny. Manampy amin'ny fanavaozana izy ireo ary miatrika ireo fanamby lehibe manerantany amin'ny sehatry ny fiovan'ny toetrandro, ny fambolena ary ny fahasalamana.
Ny lahatsoratra siantifika nadika dia manafaingana ny fandrosoana ara-tsiansa amin'ny alàlan'ny fanovozana fahalalana bebe kokoa sy hisorohana ny asa roa sosona. Manatsara ny kalitaon'ny siansa sy ny fahombiazany izy ireo. Afaka mihatsara ny fandikan-teny fampahalalana ampahibemaso, firosoana ara-tsiansa ary fahaizana mamaky teny. Ny famokarana lahatsoratra siantifika nadika koa dia mamorona setiana fanofanana hanatsarana ny fandikan-teny mandeha ho azy, izay mbola tsy ampy ho an'ny ankamaroan'ny fiteny.
Raha namaky hatreto ianao dia mety liana amin'ny fandikan-teny sy ny siansa. Miaraha aminay. Manorata anay amin'ny fotoana rehetra: manana antso 2-herinandro izahay ary lisitry ny mailaka. Mametraha hevitra etsy ambany. Ampio ny fahalalanao sy ny hevitrao ao ny Wiki. Manorata lahatsoratra bilaogy hanombohana fifanakalozan-kevitra. Miaraha aminay amin'ny media sosialy or ampidiro ao amin'ny mpamaky RSS anao ity bilaogy ity. Aparitaho ny hafatra hoe misy ny Science Science ho an'izay mety liana koa.
Navoaka voalohany tao blog.translatescience.org/launch-of-translate-science/
Sokajy:	Fampandrenesanafiaraha-miasaFomba fitenyFifandraisana ara-tsiansa
Tags: Mandika Siansafandikan-tenyFahalalana an'iza
Sokajy Select Category Fanambarana (13) Fananganana fahaiza-manao (7) Fiaraha-miasa (29) COVID-19 (31) Hetsika (7) Jeneraly (9) Hardware (1) Fahalalana vazimba (3) Tafatafa (8) Fahasamihafana amin'ny fiteny (10) Open Access (37) Open Science (16) Fampandrenesana fiaraha-miasa (2) Famerenana ny peer (8) Podcast (1) Fanontana (11) Fanontana (15) Tatitra (1) Fifandraisana ara-tsiansa (17) Fanolorana (3)
Fikarohana Afrikana Fahaizana artifisialy ASAPbio BlackLivesMatter BlackVoicesMatter Ivotoerana ho an'ny siansa misokatra chatbot Covid-19 Siansa momba ny fanapotehana DialogShift Famoahana dizitaly Azo zahana Ny fahitana amin'ny fikarohana afrikanina Eider Africa Fundraising Joy Owango fiteny samihafa Masakhane Fitetezana ny fiteny natoraly Oniversite Islamika Omdurman openaccess fahafahana misokatra OpenCollective Misokatra ny Sarintany Fahalalana misokatra siansa Open Framola momba ny siansa misokatra OSF Peer Review preprint PREreview famoahana PubPub famerenana haingana ReFigure Research Serasera fifandraisana Fifandraisana ara-tsiansa ScienceOpen SDG2 Sodàna Tanjona amin'ny fampandrosoana maharitra TCC Africa Mandika Siansa fandikan-teny Visibility